Fiaraha-miasa: 9 martsa 2022
1:00-5:00 hariva EST
Mandehana any amin'ny Ny tranokalan'ny mpikambana IWCA misoratra anarana
Asaina ianao hametraka tolo-kevitra ho an'ny IWCA Online Collaborative-Ny Antso ho an'ny Tolo-kevitra dia eto ambany. Raha mbola manohy miady amin'ny areti-mifindra sy ny fiantraikany amin'ny asantsika sy ny fahasalamantsika isika, manantena izahay fa ity andro ity dia hanome antsika fanantenana sy hery, hevitra ary fifandraisana.
Ao amin’ny antsony ho amin’ny Fivoriambe Isan-taona ho an’ny CCCCs 2022, ny filohan’ny fandaharan’asa Staci M. Perryman-Clark dia manasa antsika hisaintsaina ilay fanontaniana hoe: “Nahoana ianao no eto?” ary mba handinihana ny fahatsapana ny maha-izy antsika sy ny mpianatsika na mety tsy ho eo amin'ny toerana misy antsika.
Eo am-panohizana ny fandehanana amin'ny areti-mifindra COVID19 izay manana antsika, dia mamindra indray ny fihaonambe an-tserasera, reraka amin'ny fampahalalana sy politika tsy mifanaraka sy mifanipaka manodidina ny saron-tava, ny vaksiny ary ny asa any an-trano — ahoana no hamaliana ny fanasan'i Perryman-Clark hanohitra, ho velona. , hanavao sy hivoatra? Ahoana no handraisantsika anjara amin'ny “asa feno herim-po [izay] mitsikera sy eo am-pandrosoana”? (Rebecca Hall Martini sy Travis Webster, Ivo-panoratana ho Brave/r Spaces: Fampidirana olana manokana Ny famerenana ny peer, Boky 1, Laharana 2, Fararano 2017) Ao anatin'ny paradigma vaovao amin'ny fampianarana hybrid, an-tserasera, virtoaly, ary mifanatrika, ahoana no ahafahan'ny fanoratana toerana sy serivisy ho an'ny mpianatra rehetra? Ho an'ny 2022 IWCA Online Collaborative, ny tolo-kevitra dia asaina amin'ny fampiasana ireto fanontaniana manaraka ireto ho toy ny springboards:
Manao ahoana ny fiasan'ny fitsarana ara-tsosialy any amin'ireo ivon-toeranay? Iza no mahatsapa fa nasaina ho ao amin'ny efitranontsika ary iza no tsy? Inona no ataontsika mba hiantohana ny fahaveloman'ny mpiasantsika, ireo mpianatra tompointsika? Inona no ataontsika mba tsy ho tafavoaka velona, ​​fa mba handroso?
Ao amin'ny 2022 IWCA Online Collaborative, manasa tolo-kevitra momba ny fivoriana izay mifantoka amin'ny fifanohanana amin'ny famolavolana sy ny fanandramana, ary mifantoka amin'ny fizotran'ny fikarohana, fa tsy ny vokatra. Ny fivoriana dia tokony hanao ny iray na maromaro amin'ireto manaraka ireto:
Asao ny mpiara-miombon'antoka mba hieritreritra, hieritreritra, na hamolavola hevitra momba ny faritra / toro-lalana mety hanoratana fikarohana momba ny fampidirana.
Tariho ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fomba hampiasana ny fikarohana ivon-toeram-panoratana mba hijerena tsara kokoa ny halehiben'ny asa ataontsika, ka hahatonga ny tantarantsika ho mahasarika ny mpihaino marobe izay ifaneraserantsika ao anatin'ny sehatry ny andrim-panjakana misy antsika.
Avelao ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fanavaozana amin'ny fanoratana fikarohana foibe, ao anatin'izany ny fanosehana ny fetra na olana mifandraika amin'ny fomban-drazana lahy, fotsy, mahay ary kolonialista ao amin'ny akademia
Mizarà asa an-dalam-pandrosoana hahazoana valiny avy amin'ireo matihanina sy mpampianatra foibe fanoratana hafa
Tariho ireo mpandray anjara amin'ny fomba ahafahantsika mamadika ny fikasany tsara momba ny firaisankina sy ny fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra ho dingana mivaingana hanaovana hetsika.
Tariho ireo mpandray anjara hieritreritra sy hanomana ny mety hiova ny toerana ivon-toeram-panoratana, ny fomba fiasa ary/na ny iraka ataontsika rehefa mandehandeha ny fiantraikan'ny COVID amin'ny toeram-piasanay.
Asao ny mpandray anjara mba hamolavola drafitra hetsika hanoherana, ho velona, ​​hanavao, ary hiroborobo
Azo lazaina fa ny tanjaky ny sahan-tsika dia ny toetrantsika miara-miasa—manasa ny mpandray anjara hiara-hivondrona mba hampitombo ny fahatakarantsika manokana momba ny—sy ny firotsahana amin'ny—fahasamihafana, fitoviana ary firaisankina na aiza na aiza misy ny foibe fanoratana.
Endriky ny fivoriana
Satria ny fiaraha-miasa dia momba ny fifanohanana amin'ny famolavolana sy ny fanandramana, ny tolo-kevitra dia tokony hifantoka amin'ny dingana, fa tsy vokatra, amin'ny fikarohana; notahirizinay endrika manokana iray—ny “Data Dash”—ho an'ny tolo-kevitra voafetra izay mifantoka amin'ny fizarana ny vokatry ny fikarohana. Ny soso-kevitra rehetra, na inona na inona endrika, dia tokony hiezaka ny hametraka ny asa ao anatin'ny vatsim-pianarana foibe fanoratana sy/na vatsim-pianarana avy amin'ny taranja hafa.
Atrikasa (50 minitra): Ny mpanentana dia mitarika ny mpandray anjara amin'ny hetsika an-tanana sy traikefa mba hampianarana fahaiza-manao azo tsapain-tanana na paikady mifandraika amin'ny fikarohana foibe fanoratana. Ny tolo-kevitry ny atrikasa mahomby dia ahitana fotoana hilalaovana hevitra ara-teorika na hisaintsainana ny fahombiazan'ny asa na fahaiza-manao azo (fanadihadiana vondrona lehibe na kely, valiny an-tsoratra).
Fivoriana latabatra boribory (50 minitra): Ny mpanentana dia mitarika fifanakalozan-kevitra momba ny olana manokana mifandraika amin'ny fikarohana ivon-toeram-panoratana; Ity endrika ity dia mety ahitana fanamarihana fohy avy amin'ny mpanolotra 2-4 arahin'ny fandraisana anjara mavitrika sy manan-danja / fiaraha-miasa amin'ny mpanatrika entanin'ny fanontaniana mitarika.
Vondron'ny fanoratana fiaraha-miasa (50 minitra): Ny mpanentana dia mitarika ireo mpandray anjara amin'ny asa fanoratana vondrona natao hamokarana antontan-taratasy na fitaovana iray miaraka amin'ny fanoratana mba hanohanana ny fampidirana.
Dinika amin'ny Round Robin (50 minitra): Mampiditra lohahevitra na lohahevitra iray ny mpanentana ary mandamina ireo mpandray anjara ho vondrona mpizara kely kokoa hanohy ny resaka. Ao anatin'ny toe-tsaina amin'ny fifaninanana "round robin", ny mpandray anjara dia hiova vondrona aorian'ny 15 minitra hanitarana sy hanitarana ny resaka. Aorian'ny fifampiresahana roa farafahakeliny, dia hamory ny vondrona manontolo indray ireo mpanentana ho amin'ny fifanakalozan-kevitra famaranana.
Famelabelarana Data Dash (10 minitra): Asehoy amin'ny endrika 20×10 ny asanao: sary roapolo, folo minitra! Ity fanoloana vaovao amin'ny fotoam-pivoriana afisy ity dia manome toerana mety amin'ny lahateny fohy amin'ny mpihaino ankapobeny miaraka amin'ny fitaovana hita maso. Ny Data Dash dia mety indrindra amin'ny tatitra momba ny fikarohana na ny fisarihana ny saina amin'ny olana iray na ny fanavaozana.
Works-in-Progress atelier (10 minitra fara-fahakeliny): Works-in-Progress (WiP) dia ahitana fifanakalozan-dresaka an-databatra boribory izay iresahan'ireo mpanolotra fotoana fohy ny tetik'asa fikarohana ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao ary avy eo dia mahazo valiny avy amin'ny mpikaroka hafa ao anatin'izany ny mpitarika ny fifanakalozan-kevitra, ny mpanolotra WiP hafa, ary ny mpandray anjara hafa mety hanatevin-daharana ny fifanakalozan-kevitra.
Fangatahana fandefasana: 20 Febroary 2022
Raha te handefa tolo-kevitra sy hisoratra anarana amin'ny Collaborative dia tsidiho https://iwcamembers.org.
Fanontaniana? Mifandraisa amin'ny fihaonambe iray amin'ireo seza, Shareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu na John Nordlof, jnordlof@eheast.edu.